Uzozethula ngokusemthethweni kwiMpucuzeko uBhekihonga - Ilanga News
Home Ezemidlalo Uzozethula ngokusemthethweni kwiMpucuzeko uBhekihonga
Ubona beyiziphoxi kumasikandi abangakwazi ukudlala isigingci
BONA beyiziphoxi kumaskandi abaculi abangakwazi ukudla-la isigingci umfowabo kaSbongiseni “Mjikijelwa” Nguba- ne (ongasekho), othi kumele (laba baculi) banganikwa ithuba lokucula bukhoma.
UBheki “Bhekihonga” Ngubane (30), owanikwa “ifa” lokuqhubeka nomsebenzi womfowabo, uMjikije-lwa, ukhuluma kanjena nje, uni-kwe ithuba lokucula bukhoma kwiMpucuzeko Maskandi Festival engomhla ka-20 kuNtulikazi (July) eMoses Mabhida Stadium – oku-ngomuye wemicimbi ehamba pha-mbili KwaZulu-Natal naseNingizi-mu Afrika.
UBhekihonga uthi uthwale ka-nzima emuva kokushona kukaMji-kijelwa egxekwa kuthiwa akukho okungenziwa nguyena emculweni ngoba ubengakaze ezwakale ecu-la. Uthi kwiMpucuzeko uzozibona-kalisa okokuqala ngqa ecula bu-khoma.
“Lo mcimbi yiwona ozocacisa ngekhono lami emculweni. Ngizo-be ngizethula ngokusemthethweni kubantu, babone okusha kimina. Ngiyabadabukela laba abanginga-bazayo,” kusho uBhekihonga.
Uthi ngesikhathi etshelwa kubo ukuthi usezohola umculo kaMjikijelwa, ubenovalo lokuthi uzokwazi yini ukumelana nalo msebenzi noma uzowubulala.
Uthi zonke lezo zingqinamba yizona ezenze waqhamuka neqembu elisha elibizwa ngoku-thi EzeChalaha, esi-khundleni seqembu Amangcukumane ebelilindelwe nje-ngoba belishiywe nguMjikijelwa.
“Abantu baya-wazi ushuni waMa-ngcukumane, uma bengifike ngashi-ntsha abakujwayele ngeza abanga-kulindele, (kuMangcukumane) be-kuzobe sengi-zibulele, yi-ngakho-ke ngiqhamuke nokusha endimeni ngazethula ngephimbo lami nginga-lingisi muntu.
jelwa ube-kholelwa kakhulu ekubeni umu-ntu enze okwa-khe, kodwa-ke liyeza.
“ Lona iqembu Ama-ngcukumane sisazoqhubeka nalo,” kusho uBhekihonga.
Uthi kwiMpucuzeko uzobe ejabulisa aba-ntu ngezingoma okuba-lwa kuzona ezithi “Ubani Ongathinta Izi-honga”. Utshele ILANGA ukuthi okwe-nza awulambele ka-khulu lo mcimbi wukuthi uzobe ezishayela isigingci asifunde ngo-2002.
“Empeleni abaculi abangakwazi ukudlala intambo kumele ngabe kabanikezwa ithuba lokucula bukhoma ngoba bayasiphoxa emculweni. Omunye wabo ngimzwile ekhuluma emaphepheni ethi akangazi mina.
“Ngiyaxakeka ngoba phela yena kangimuzwa ngisho uma
ekhiphe i-albhamu yakhe, ngihlale ngikhunjuzwa ngabantu sekwe-dlule bethi wayekhiphile,” kusho uBhekihonga echoma.
aseyatholakala eTickets Pro, ezitolo okubalwa
no-Edgars. I-golden circle ibi-za u-R250, i-general standing uR200
kanti i-general seating u-R150.
Leli nani lamathikithi
uzophulelwa u-R50 uma ulithenga manje kuze kushaye umhla ka-25 kule nyanga.
Previous articleUmfundisi uboshelwe ukudlwengula
Next articleKuchithwa izibhamu kothisha ezikoleni